के तपाईंलाई थाहा छैन कि त्यो कति कमाउँछ कसैलाई सोध्न असम्भव छ? सिनेमाको ताराको विशाल धनको विशेष, सबैको लागि रुचिको स्रोत हो। सौभाग्य देखि, हामी एक बटन को एकल क्लिक संग, कसैको सम्पत्तिको बारेमा जान्न सबै केहि पाउन सक्छौं। आइपुग्दा कुन वर्षका सेलिब्रेटीहरूले यस वर्ष सबैभन्दा बढी कमाए, र जसले दिवालियापनको कगारमा खोजे।
मानिसहरू प्रकृति उत्सुक छन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू ताराहरू भन्दा ताराहरू भन्दा बढी ताराहरूको कमाईको बारे जान्छन्। आखिर, धेरै सेलिब्रेटीहरूले उनीहरूको पहिलो लाख कमाएपछि उनीहरू एकदम ठुलो बच्चा थिए। त्यसोभए, चलो तपाईंको ध्यानमा उपस्थित हुनुहोस् 15 सेलिब्रेटीहरू जसलाई थाहा भएन उनीहरूले कति पैसा कमाए।
Rupert Grint, "हैरी पोटर" को रूप मा पनि जाना जाता छ (जस्तै कि वास्तव मा वास्तव मा पेश गरे को आवश्यकता हो), केवल 11 वर्ष थियो जब उनले एक युवा जादूगर को भूमिका पाए। त्यस समयमा उनको कुनै व्यावसायिक अभिनय अनुभव थिएन, यद्यपि उनले स्कूल खेलमा भाग लिइन्। कतारको भूमिका ग्रिन्टमा जमाएको थियो, केटालाई एक लाखपति व्यभिचार गर्नु अघि। तर Rupert आफैले, आफ्नो नायक रॉन जस्तै, यो तथ्यलाई सजिलै बुझाउँछ। उनीहरूलाई पनि थाहा छैन कि कति भुक्तानी गरिएको थियो। जब यसको बारेमा सोध्नुभयो, तिनले स्वीकार गरे कि त्यो सही रकम थाहा छैन। तर हामी जान्दछौं। यो लगभग 30 मिलियन डलर छ, र सम्भवतः अधिक। यस पैसाको लागि तपाईं एक भन्दा बढी आइसक्रीम वान किन्न सक्नुहुन्छ, तर अभिनेताले बेकार नगरी पैसा बर्बाद गर्दैन।
यस सेलिब्रिटीको साथ, यो धेरै सरल छैन। श्रृंखला "लोनले हार्ट्स" माईशाले एकदम ठूलो रकम पाएका थिए, तर तथ्य यो कारणले गर्दा उनी बच्चा जन्माइन्, उनले आफ्नी छोरीलाई पैसा तिर्खाए। उनको अचम्मको कल्पना गर्दा उनीले थाहा पाउनुभयो कि उनको आमाले तिनलाई पूर्णरुपमा बर्बाद गर्यो। दुर्भाग्यवश, धेरै सेलिब्रेटी बच्चाहरु यस्तो घटनाको सामना गर्दैछन्, मक्काले कल्किन र शर्ली मंदिरले यो भाग्यबाट बचाउन सकेनन्। बार्टन को मामला मा माई, जो अभिनेत्री को प्रबंधक थिए, उनको आय को लागी उनको रवैया ले भन्यो र अन्त मा आफुहरु को सम्पत्ति को थोक को रूप मा लिया। परीक्षण योजना भएको थियो, तर पछि मिशाले दावी गरे। सम्भवत यो अवस्थाले बताउँछ किन अभिनेत्री बैंकको खातामा केवल 1 करोड डलर।
Rappers आफ्नो सम्पत्ति को बारे मा घमंड जस्तै लाग्छ, र लिल वेन कुनै अपवाद छैन। तथापि, यो स्थिति विशेष छ। फोर्ब्स अनुसार, वेनले 2015 मा $ 150 मिलियन कमाई। यद्यपि, लिल आफैलाई तर्क गर्छ कि यो रकम धेरै कम छ। त्यसो त तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ - लिला वेन वा फोर्ब्स पत्रिका?
यो उन हस्तिहरु मध्ये एक हो जसले धेरै ठूलो कमाई छैन, जो अचम्म छ। र कुरा यो कुरा हो कि ताराले धेरै खर्च गर्यो, यद्यपि उनले त्यो समय कमाउन सक्थे। हलिवुडले लामो समयसम्म उनको सेवा त्यागेका छन्, जटिल प्रकृति र ताराको अन्य विचलितताहरु लाई थाहा छ। 2013 मा, लोहानले ओपरा शोमा भाग लिन2मिलियन डलर कमाई, तर तुरुन्तै उसले 200 हजार डलर तिर्नु पर्ने थियो। बाकी पुनरुत्थानको लागि ऋण तिर्न गए। आज सम्म, लिन्डसे लोहान को खाता मा केवल एक मिलियन डलर, जो यति धेरै छैन।
जैकी चानलाई हलिवुड फिल्म उद्योग बाहिर काम गर्ने दोस्रो उच्च भुक्तानी अभिनेता मानिन्छ। केवल यस वर्ष, चियांगले 50 मिलियन डलर कमाई, र आफ्नो खातामा मात्र 350 मिलियन कमाई गर्यो। तर चान यस तथ्यको बारेमा विशेष गरी आनन्दित छैन र उहाँका उत्तराधिकारी, जेसीको एक मात्र छोरालाई पैसा हस्तान्तरण गर्न जाँदै हुनुहुन्न। उसले विश्वास गर्छ कि पुत्र आफैले कमाउनु पर्छ, यदि उसले चाहन्छ भने, त्यसपछि उहाँले पैसाको मूल्य बुझ्नुहुनेछ। यद्यपि, जैकी चानले नियमित रूपमा ठूलो रकम धैर्य कोषमा स्थानान्तरण गर्दछ, त्यसैले तपाईं उसलाई ठुलो बोलाउन सक्नुहुन्न। बरु, यो अग्रेषित-हेर्ने आमाबाबुको स्थिति हो।
बिल गेट्स को समस्या यस्तो समस्या छैन। थाहा छैन ठीक छ कि उनको बैंक खाता मा कितना पैसा छ, त्यो जानता छ कि त्यो दुनिया को सबै भन्दा अमीर मान्छेहरु मध्ये छ। र उहाँ आफैं यसका साथ सधैँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तथ्य यो छ कि एक निश्चित स्तर माथि सम्पत्ति एक खतरा र जिम्मेवारी हो। यो रकम कसरी बुद्धिमानी प्रयोग गर्ने? छोराछोरीलाई छोड्नुहोस्? र के उनीहरूले राम्रो गरे? उनको आय को आधा व्यापारीले 2019सम्म विश्वभर पोलियोमेमीलाइटिसलाई पराजित गर्न दानव र योजना दिन्छन्।
माइक टायसन लिन्डसे लोहानको रूपमा एउटै टोलीमा थिए। आजसम्म, प्रसिद्ध बक्करले प्रायः आफ्नो सबै बचत भोग्नुभयो। उहाँले तुरुन्तै एक प्रबन्धक भाडा चाहिन्छ जसले घोटाला खेलाडीको आय र खर्चलाई संतुलन गर्न मद्दत गर्नेछ। सबै पछि, तिनी एक पटक आफ्नो खातामा 300 मिलियन डलर थिए। र आज त्यहाँ मात्र 1 मिलियन थियो। यो कसरी सम्भव छ? तलाकका कार्यवाहीमा धेरै पैसा खर्च भएको थियो, र अझ बढी माइकले अचम्म लागे। उदाहरणका लागि, उनले तीन बंगाल बाघहरू किन्नुभयो।
सायद तपाईंका छोराछोरीहरू र यो अभिनेतालाई चिन्नुहुन्न, किनभने उनीहरूको तारा भूमिका 80 बर्षको उमेरमा आइपुग्थ्यो। उनले "Ghostbusters" चलचित्रमा खेलेका थिए "प्रिय, म बच्चाछोरीलाई सिकाउँछु" र अन्य प्रसिद्ध परियोजनाहरू। उहाँ हाम्रो बचपनको अवधिको प्रमुख थिए। र त्यसपछि अचानक स्क्रिनबाट गायब भयो। तथ्य यो हो कि आफ्नी श्रीमतीको मृत्यु पछि, उनले बच्चाहरु लाई उठाउन को लागी एक ब्रेक लिने निर्णय गरे। अब उहाँ हटाइएको छैन, तर कहिले काँही उनी आवाज अभिनयमा संलग्न छन्।
यस अभिनेत्रीको करियरको शिखर 2010 मा आयो। तब देखि, त्यो सानो हटाइएको छ र पहिले नै एक पूर्व अभिनेत्री हो। ब्यान्सको सम्झना छैन कि उनीहरुले त्यो भूमिकालाई कसरी लाएकी थिईन्, तर विश्वास गर्दछिन् कि उनले मैरी केट र एशले ओलसनको रूपमा कमाएको छ। यो एकदम सही छैन। ओल्सेन बहिनीहरूको अवस्था 300 मिलियन डलर छ, यो स्पष्ट छ कि अम्याण्ड, उनको चार लाख जुटाइहरूको भाग्यमा, अझै टाढा छ।
उहाँले आफ्नो कामका वर्षहरूमा राम्रो भाग्य बनाउन सक्षम थिए। यो योग्य प्रबंधनको लागि सम्भव भयो। उदाहरणका लागि, जोकरको भूमिकाको लागि, अभिनेताले6मिलियन डलर प्रदान गर्यो। तर जैकले बिक्रीको प्रतिशत छान्थ्यो। रणनीतिले परिणाम ल्याए, निकोलसनले6सय भन्दा बढी 50 मिलियन पाउनुभयो।
टम ह्याङ्ले खरगोशलाई पराजित गर्यो, वन गम्पको भूमिका खेल्दै। अभिनेताले निश्चित शुल्कको सट्टा बिक्रीको प्रतिशतमा पनि शर्त दिन्छ। नतिजाको रूपमा उनले आफ्नो बैंक खाता लगभग 100 मिलियन डलर कमाए। यहाँ यस्तो भाग्यशाली टिकट हो जुन कहिलेकाहीं तपाईं अभिनेताहरू खिच्न सक्नुहुन्छ।
यो अभिनेता एक हो जसले एक फिल्मको लागि पैसा कमाउने सबैभन्दा सक्षम थियो। चित्रकारी "छठे सांस" को लागि अभिनेता एक प्रतिस्पर्धात्मक अनुबंध को लागी लगभग $ 120 मिलियन प्राप्त भयो। कुनै पनि फिल्मलाई सफल हुन सफल भएन, त्यसैले आकाश उच्च राजस्व अभिनेताहरू योजना थिएन।
यो एकदम एक अभिनेता होइन, तर ट्रम्पले यस सूचीमा पाएको छ किनकी उसले उनको आयको आकार बारे थाहा छैन। फोर्ब्स विशेषज्ञहरूको अनुसार, उनको खातामा4अर्ब रुबलहरू छन्, ट्रम्पले आफूलाई निश्चित छ कि उनको भाग्य कम्तिमा 10 बिलियन डलर हो। यद्यपि यदि हामी 7.3 अरबको औसत मूल्य लिन्छौं, परिणाम प्रभावशाली छ।
यस अभिनेताले फिल्मको लागि कम्तिमा $ 20 मिलियन प्राप्त गर्यो। एक श्रृंखला को लागि "मिशन इम्स्पेसिमी" क्रुज को कुल मिलाकर290मिलियन डलर मिले। र यो सबैभन्दा महंगी परियोजना होइन, जसमा खेलाडीले भाग लिइन्। संसारको युद्धको एक भागमा, टमले लगभग 100 मिलियन डलर पायो।
एम्मा वाटसन, जो हर्मिओन ग्रानगर पनि थिए, उनी 17 बर्षदेखि भएन, थाहा छैन कि उनी कति पैसा कमाए। वास्तवमा, यसको खाताहरू Rupert Grint रूपमा एकै हो। यो लगभग 30 मिलियन डलर छ। यद्यपि, 17 औं जन्मदिन अघि, ताराको बुबाले पैसा व्यवस्थापन गरिरहेको थियो र खर्चको लागि उनको मात्र $ 75 दिए।
कसरी पेपैलमा धेरै तरिकामा पैसा राख्नुहोस्
पहिलो गर्भावस्था महिलाहरु मा पहिलो रहनेबारे जोडदार
को endometrium को छाप - यो के हो?
दबाइ "Losek"। निर्देशन
घरमा Hyperextension: रोगहरु को फिर्ता रोकथाम
आँखा रातो। के गर्न
Warcraft को हाइड विश्व: Enchanting
"समुद्र तट मा" कस्मेटिक्स सानो fashionistas लागि